မုန့်ဟင်းခါး/Piquant Fish Soup With Rice Noodles | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ဘယာကြော် ပူပူလေး/ Deep fried warm Chana Dal
သီးစုံ ထောပတ်ထမင်းကြော် →
မုန့်ဟင်းခါးဆိုတာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ သင်္ကေတ တစ်ခုပါနော်၊ ဘယ်အချိန်စားမလဲ မရိုးဘူးဆိုတဲ့ ရိုးရာအစားအစာပါ၊ ချက်နည်းလေးတွေက နေရာဒေသ အလိုက်နဲနဲချင်းစီကွာပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ နေရာဒေသ အလိုက်ကွာတယ်ဆိုလို့ အညာမှာ ငယ်ငယ်တုံးက မိဘတွေရှင်ပြုအလှူ သွားလုပ်တုံးကပေါ့၊ ရွာထိပ်မှာ မုန့်ဟင်းခါးသည် ရောက်နေတယ် ဆိုလို့ မောင်နှမတွေ ပြေးလိုက်ရတာ Blackpoolကအကိုလဲပါတယ်၊ ပြီးတော့ ပဲဟင်းတွေကိုဆမ်းပေးတာ၊ မုန့်ဖတ်တွေကလဲ ညှပ်ခေါက်ဆွဲလိုဟာမျိုးတွေလေ၊ ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ပဲရေပွ ဆိုတာဒါပေါ့။ အမှတ်တရပေါ့နော်။
ခု အိသက် ချက်မှာက ယောက္ခမမေမေ(ဝါးခယ်မဇာတိပါ) Londonလာတုံးချက်ပြခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ၊ .
Piquant Fish Soup with rice noodles namely M0h-hnin-ghar isasignature dish of Myanmar. It will never bore you no matter whenever you like to eat. The methods of cooking are varied from one province to another. Speaking of which, when I was younger I came with my parents to their donations in one of the provinces where I was told that at the top the village, there wasaMoh-Hnin-Ghar hawker so my brother who is now in Blackpool and I were running up there in hurry only to find that the gravy was made of in fact full of chana dal. Furthermore, the noodles were likeaflat type, so all my eagerness went for nothing as that was not my style. Well, it’samemory that lives.
Now I am going to cook in the way of War Khae Ma Style, where my mother-in-law was born and she showed me the way when she was in London.
-ငှက်ပျောအူ ( ပါးပါးလှီးကာ နနွမ်းနဲနဲ ဖြင့်နယ်ပြီးရေခဏစိမ်ကာပြုတ်ပြီး ဆယ၍် ရေအေးစိမ်ထားပါ)
– မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထဲ့ သောကြက်သွန်နီအသေးလေးများ
-ဆန်လှော်မှုန့်၊ ရွှေကြည်မှုန့်(လှော်ပြီး) -ဆန်ချိန်ခွက်တဝက်စီ
-စပါလင် ၂ပင် (ထုပြီးထုံးထားပါ)
-light soy sauce
-Paste of Chana Dal and its’ boiled soup
-dry rice flour,dry fry semolina flour
ငါးခူကိုရေစင်စင်ဆေးပြီး စပါလင်၊ ဆနွန်း၊ ငံပြာရည် တို့နဲ့ပြုတ်ထားပါ၊ ပြုတ်ပြီးသား ငါးကိုအသားထွင်ပါ၊ ငါးအရိုးများကိုထောင်းပြီးပြုတ်ရည်စစ်ယူပါ(ချိုလို့) ၊
Wash the Catfish thoroughly and boil it with spring onion, turmeric and fish sauce. Then filleting the fish and pound the bones and get the juice to use as it givesanaturally sweet taste.
Dry-fry the ground nuts and pound it.
ဆန်လှော်မှုန့်၊ ရွှေကြည်မှုန့်(လှော်ပြီး) ရေဖျော်ထားပေးပါ
Dry-fry rice flour and semolina flour are to be diluted with water.
ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ကိုဂျင်းနဲ့ ထောင်းပြီးစပါလင်၊ ဆနွန်းနဲ့ ဆီသတ် ငါးအသားထဲ့ပြီး ကျွတ်လာတဲ့အခါ ငါးပြုတ်ရည်ထဲ ထဲ့ပြီးရေတစ်လီတာခွဲလောက်ထပ် ထဲ့ပြီးပွက်ပါစေ၊ ပွက်တဲ့အခါကုလာပဲပြုတ်ရည်နှင့်ချေထားပြီးသားပဲနှစ်၊ မြေပဲဆံလှော် ထောင်း၊ ဆန်လှော်မှုန့်၊ ရွှေကြည်မှုန့်(လှော်ပြီး) ရေဖျော်ပြီးသားတို့ကိုရောပါ၊ အပေါ့အငံမြည်းပြီးလိုတာထပ်ထဲ့ပါ၊
Sizzle the onions, garlic and ginger which are already pounded with turmeric and add the boneless fish until it’s crispy. Then add inabigger pot, addaboiled fish water about 1 and half litres until it boils then drop in the chana dal boiled water, paste chana dal, pounded ground nuts, dry-fry rice flour and dry-fry semolina with water. Then addabit more fish sauce if necessary.
နောက်ဆုံးမှ ကြက်သွန်နီအသေးလေး များ နဲ့ ကြက်ဥပြုတ်များထဲ့ပါ၊ ပွက်ပွက်ဆူရင် ငရုတ်ကောင်းခတ်ပါ၊
မုန့်ပန်းကန်ထဲကို မုန့်ဖတ်ထဲ့ ဆီချက်ထဲ့ ၊ငရုတ်သီးအကျတ်မှုန့်လိုသလောက်၊ နံနံပင်၊ ကြက်ဥ၊ ပဲကပ်ကြော် အီကြာကွေး တို့နဲ့ ပြင်ပါ၊ ပွက်ပွက်ဆူသော ဟင်းချိုကိုထဲ့ပြီးငံပြာရည်၊သံပုရာသီး လိုသလိုထဲ့ပြီးစားနိုင်ပါပြီ..
Lastly, add the small onions and boiled eggs. When it boils, sprinkle the pepper.
To prepareadish, inaserving bowl, add the boiled rice vermicelli, then cooked oiled with garlic, dried crushed chilli, coriander, slices of eggs, fried chick peas in glutinous dough, deep fried glutinous rice stick and the fish sauce as required and fresh lime juice as required then it is ready to enjoy by pouring the gravy on top of it.
17 comments on “မုန့်ဟင်းခါး/Piquant Fish Soup With Rice Noodles”
21/02/2012 @ 8:12 am
အိသက်ရေ အဆင်ပြေရင် မြန်မာကြော်စုံ ကြော်နည်းလေးတင်ပေးပါဦးနော်…ပဲကပ်ကြော်တို့..မန္တလေးပဲကြော်တို့လိုမျိုး…အိသက်အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်…အားလုံးအတွက်လဲကျေးဇူးပါ…
21/02/2012 @ 3:21 pm
ဟုတ်ခဲ့ ပဲကပ်ကြော် ဒီညတင်လိုက်မယ်နော်.ဟုတ်ခဲ့ ပဲကပ်ကြော် ဒီညတင်လိုက်မယ်နော် ကျေးဇူးနော် နန်းရေ
22/02/2012 @ 2:04 am
18/04/2012 @ 7:35 am
ဒို့က မြောင်းမြဇာတိမလို့ မုန့်ဟင်းခါးဆို မအိသက်ချက်တာမျိုးပဲကြိုက်တယ်……ကျေးဇူးပါနော်
18/04/2012 @ 8:43 am
ယောက္ခမက ဝါးခယ်မသူလေး လန်ဒန် လာလည်တုန်းသင်ပေးသွားတာ 🙂
Moe Moe Thandar Margaret
01/11/2012 @ 7:53 am
02/11/2012 @ 2:02 pm
07/11/2012 @ 3:00 am
08/11/2012 @ 7:14 pm
i will do it when i will be free naw. promise 🙂
09/11/2012 @ 6:19 am
14/11/2012 @ 4:57 am
မမရေ ……… ငါးခူက ဘယ်လောက်သားလောက် ထည့်ရမှာလဲ မမ
15/11/2012 @ 10:21 am
1 cat fish for this ratio, i mean the big one like 1 feet 🙂
21/11/2012 @ 6:42 pm
1 fish which is about 8 inches 🙂
05/06/2013 @ 1:52 am
Whole wheat flour and semolina flour is the same
30/06/2013 @ 7:34 am
05/09/2013 @ 11:02 pm